नयाँ वर्षको अवसरमा सुरु भयो ‘क्लिन गाइघाट, ग्रीन गाइघाट’ अभियान । – Yuwa Aawaj
नयाँ वर्षको अवसरमा सुरु भयो ‘क्लिन गाइघाट, ग्रीन गाइघाट’ अभियान ।
बैसाख ३, २०७८ शुक्रबार 207
उदयपुर : उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटलाई हरित शहरको रुपमा विकास गर्नका लागि क्लिन गाइघाट ग्री’न गाइघाट अभियान सुरु भएको छ ।
नयाँ वर्षको अवसर पारेर नगर क्षेत्रलाई हरित नगर बनाउने अभियान अन्तर्गत त्रि’युगा नगरपालिका उदयपुरले अभियान सुरु गरेको हो । एक कार्यक्रमका बीच त्रि’युगा नगरपालिका प्रमुख वलदेव चौधरीले अभियानको सुरुवात गरेका हुन् ।
बैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसरमा नयाँ कामको थालनी गर्ने योजनाका साथ अभियान सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यस अभियान अ’न्तर्गत गाइघा’ट दिक्तेल सडक खण्ड अन्तर्गत गाइघाट मुख्य चोक आसपासका क्षेत्रका सडक बीचमा वृक्षरोपण गर्ने काम सुरु गरिएको हो ।
त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रका सबै स्थानमा सफा शहर निर्माणका लागि अभियान सुरु गरिएको हो । यस अभियान अन्तर्गत गाइघाट बजार क्षेत्रमा हुने अव्यवस्थित पार्किङलाई स–शुल्क र
निःशुल्क क्षेत्र निर्माण गरेर पार्किङ व्यवस्थित गर्ने, सबै घर अगाडि विरुवा रोपनलगायत गरिने नगर प्रमुख चौधरीले बताए । अभियान पहिलो दिन स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, स्थानीय युवा तथा नागरिकहरुले संयुक्त रुपमा
मुख्य चोक क्षेत्रमा विरुवा रोपन लगायतको कामको सुरुवात गरिएको छ । त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रभित्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बृद्धि गर्दै नगरको सुन्दरता बढाउनका लागि पनि नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरु निर्माण गर्दै अघि बढेको जनाएको छ ।
Prev‘चुच्चे नक्सा’ सहित ४ सय ५२ जना विभूषित ।
Nextगरीब तर गैर जिम्मेदार होईन, पातबाट बनेको मास्क, विश्व चकित पारेकाे हृ’दयविदारक तस्विर !
२८ करोड कर छलीको आ’रोपमा आँखा नदेख्ने सुकुम्बासी उमाशंकर नख्खु जे’लमा !
इस्कूस खानुको अचम्मैको ९ फाइदाहरु !
हार्दिक बधाई ! केपी शर्मा ओली एसियाकै प्रभावशाली र दूरदर्शी नेता अवार्ड बाट सम्मानित…हेर्नुहोस् ।
यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश । (14856)
१. यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश । (14856)